गण्डकीमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन,के हुन्छन त? | Khabar Sadan खबर सदन
Home राजनीति गण्डकीमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन,के हुन्छन त?
– विश्वासको मत लिन असफल भएका छन तर गण्डकीका पदमुक्त मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छन् ।
प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा सकिन लाग्दा गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् ।
उनको दाबीमा जनता समाजवादी पार्टीको प्रदेश समिति र जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको साथ रहेको उल्लेख छ । तर, जनता समाजवादीका सांसदहरू भने आफूहरूको समर्थन विपक्षीलाई रहेको बताइरहेका छन् ।
जनता समाजवादीको प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बालाई साथ रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दिएको थियो । विश्वासको मत दिने बेलामा तटस्थ बसेका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले आफ्नो साथ अहिलेकै सरकारलाई रहेको बताएको भन्दै दाबी पेस गरेका हुन् ।
तर, विपक्षीले भने सांसदलाई नै उपस्थित गराएर दाबी पेस गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले भने किर्ते काम गरेर आफूलाई रोक्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
Previous articleज्ञानेन्द्र शाही र उनको ड्राइभर दुवैलाई सुर्खेतमा हिजो राती १० बजे निर्घात कुटपिट,किन
Next article१० जना पक्राउ गोरु काटेको आरोपमा